Earth Hour 2020 - Recycle Myanmar
March 27, 2020 by Recycle Myanmar in Environment
Earth Hour ဆိုတာ ဘာလဲ။
Earth Hour ကို ကျွန်တော်ကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့လည်ပတ်နေခြင်း လို့ မြန်မာမှုပြုချင်ပါတယ်။ နာရီဆိုတာက လည်ပတ်ခြင်းသဘောတရားကိုဆောင်ပြီး အချိန်ကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်သလို ကမ္ဘာမြေဆိုတာကလည်း ဂေဟစနစ်လည်ပတ်ခြင်းကနေ သူ့ကျောပြင်ပေါ်မှာနေထိုင်သူများအားလုံးဆီသို့ အသက်ရှင်ခြင်းကို ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နာရီတစ်လုံးဟာ လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားရင် ဘာမှသုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအပါအဝင် သက်ရှိအားလုံးမှီတင်းနေထိုင်နေရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးကများ သူ့ရဲ့ဂေဟစနစ်တွေပျက်ယွင်း ပြီး လည်ပတ်နေမှုရပ်တန့်သွားခဲ့ရင်။
Earth Hour ဆိုတာ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီး လူတန်းစားမျိုးစုံပါဝင်နိုင်တဲ့ပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အလှတရား၊ တန်ဖိုးကြီးမားမှု နဲ့ အသက်ရှင်သန်ရခြင်းမှာ ကမ္ဘာမြေရဲ့မရှိမဖြစ်အရေးပါမှုကို လူတိုင်းသိနားလည်စေဖို့ ပြသတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Earth Hour ကို မတ်လနှောင်းပိုင်းတစ်ရက်ရက်မှာ ည ရှစ်နာရီမိနစ်သုံးဆယ် ကနေ ကိုးနာရီမိနစ်သုံးဆယ် အထိကြားကာလ တစ်နာရီတိတိကြာချိန်ကို ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့လျှစ်စစ်မီးတွေပိတ်ပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။
Earth Hour ဟာ WWF Organization နဲ့ ပါတနာအဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းပြီး 2017 ခုနှစ်က ဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေမှိတ်ခဲ့ရာကနေ စပြီး ပေါ် ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေစပြီး Earth Hour ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြေခံလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2019 ခုနှစ်မှာဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၈၈) နိုင်ငံမှာ Earth Hour ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းမှသည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအထိ အတုယူလုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ 2017 ခုနှစ်မှာ ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွှေတိဂုံ စေတီတော်တွင် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းကာ Earth Hour 2017 မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Earth Hour ကို ကျင်းပချိန်ဟာ တစ်နာရီပဲကြာမြင့်တယ်ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒီနေ့ရဲ့ နေ့ခင်းဘက်တွေမှာလည်း သစ်ပင်စိုက်တာတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး လမ်းလျှောက်ချီတက်တောင်းဆိုတာတွေ၊ စက်ဘီးစီးတာတွေ၊ ကမ်ပိန်းပြုလုပ်တာတွေ စတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှုတွေကို လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ဒီနှစ်ရဲ့ Earth Hour 2020 ကတော့ မတ်လ (၂၈)၊ စနေ နေ့မှာ ကျရောက်မှာဖြစ်ပြီး ည (၈:၃၀)နာရီကနေ (၉:၃၀) နာရီ အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဒေသစံတော်ချိန်အလိုက် ကျင်းပသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအနေနဲ့ လည်း တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ပါဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဖြစ်စေ Earth Hour 2020 မှာ လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကို တစ်နာရီလောက်အနားပေးပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
Recycle Myanmar အနေနဲ့ Covid 19 အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် Stay at Home လုပ်ရင်း ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref; www.earthhour.org.com and WWF Myanmar Fb Page
Earth Hour 2020 Recycle Myanmar WWF Myanmar
#1 Recycling Platform on7Studio
RM Media Launch on Eleven Media
Recycle Myanmar’s Media Launch (MCN)
RM News on Zee Kwat Media
Recycle Myanmar is positioned to be the only platform to create opportunities for the entire waste management and circular economy in Myanmar.
Earth Hour 2020 March 27, 2020
#1 Recycling Platform on7Studio October 9, 2019
RM Media Launch on Eleven Media October 9, 2019
Recycle Myanmar’s Media Launch (MCN) October 9, 2019
2019 © Copyright, Recycle Myanmar. All Rights Reserved.